फिफा ‘द बेस्ट’ अवार्ड :कसले के–के जिते ? – LIGHT NEWS
International खेलकुद मुख्य समाचार
September 25, 2018 सुबास मसिही0
को को छन् उत्कृष्ट ११टोलीमा?
टोलीको गोलरक्षकमा स्पेन तथा म्यानचेस्टर युनाइटेडका डेविड डे हेया रहेका छन् । डिफेन्सको जिम्मेवारीमा रियल म्याड्रिडको वर्चस्व रहेको छ । पीएसजीका ब्राजिलियन डिफेन्डर ड्यानीएल आल्भेससँगै रियलका डिफेन्स त्रय सर्जियो रामोस, राफेल भारान र मार्सेलोले रक्षापंक्ति सम्हालेका छन् । मिडफिल्डमा भने मुख्य उपाधि विजेता मिडफिल्डर लुका मोड्रीच र एनगोलो कान्टेको जोडी रहेको छ । आक्रामक मिडफिल्डमा बेल्जियमका कप्तान इडेन हाजार्ड छन् । उनलाई बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय टोलीका कप्तान लिओनेल मेसीले साथ दिएका छन् । पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो र फ्रान्सेली युवा फरवार्ड किलियन एमबाप्पेले आक्रमणको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
अवार्ड समारोहमा मेसी र रोनाल्डोबाहेकका ९ जना खेलाडी नै उपस्थित रहेका थिए । दुवै खेलाडीको अनुपस्थितिले अवार्ड समारोह केहि खल्लो भएको थियो । कार्यक्रम संचालक सेलिब्रेटी इद्रिस अल्बाले दुवै खेलाडी उपस्थित नहुँदा पटक पटक व्यंग्य प्रहार गरेका थिए । यसअघि रोनाल्डो युरोपेली उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा परेर पनि अवार्ड समारोहमा सहभागि भएका थिएनन् ।
मेसी, रोनाल्डो र बेलको गोललाई पछार्दै सलाहलाई उत्कृष्ट गोलको उपाधि
लिभरपुलका विंगर तथा इजिप्ट राष्ट्रिय टोलीका मोहमद सलाहले फिफा पुस्कास अवार्डको उपाधि जितेका छन् । उनले झन्डै ३८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै उपाधि जितेका हुन् । फिफा पुस्कस अवार्ड वर्षको उत्कृष्ट गोल गर्ने खेलाडीले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । सलाहले उक्त गोल गत सिजन एभरटनविरुद्ध एफए कप खेलमा गरेका थिए । झन्डै ५ करोड मत आएकोमा सलाहले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका थिए । हालसम्म यो अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेयमार, हामेस रोड्रीग्वेज, ज्लाटन इब्राहिमोभिच, ओलिभिर जिरुड लगायतका खेलाडीले जितेका छन् । यसपटक पनि मनोनयनमा रोनाल्डो, लिओनेल मेसी र ग्यारेथ बेल रहेका थिए । तर सलाहले अत्यधिक मत प्राप्त गर्दै बाजी मारे ।
मनोनयनमा परेका गोलकर्ता र खेल :
ग्यारेथ बेल (रियल म्याड्रिड विरुद्ध लिभरपुल)
डेनिस चेरेसेभ (रुस विरुद्ध क्रोएसिया)
लाजरोस क्रिस्टोडोलोपोलस (एथेन्स विरुद्ध ओलाम्पियाकोस)
राइली मक्ग्री (न्युकासल जेट्स विरुद्ध मेलबर्न सिटि)
जिओर्जियन डे अरसकेता (क्रुजेरियो विरुद्ध अमेरिका मिनिएरो)
बेन्जामिन पभार्ड (फ्रान्स विरुद्ध अर्जेन्टिना)
लिओनेल मेसी (नाइजेरिया विरुद्ध अर्जेन्टिना)
रिकार्डो करेज्मा (इरान विरुद्ध पोर्चुगल)
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (युभेन्ट्स विरुद्ध रियल म्याड्रिड)
मोहमद सलाह (लिभरपुल विरुद्ध एभरटन)
पेरुलाई उत्कृष्ट समर्थक उपाधि
रुसमा भएको विश्वकपका दौरान लामो दुरी पार गरेर झन्डै ४० हजारको संख्यामा रुस पुगेका पेरु राष्ट्रिय फुटबल टोलीका समर्थकले उत्कृष्ट समर्थकको उपाधि हात पारे ।
लेन्नार्टलाई फेयर प्ले अवार्ड
डच क्लब भीभीभी भेन्लोका खेलाडी लेन्नार्ट थिले फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । उनले एक समर्थकलाई रगत दिनुपर्ने अवस्थामा क्लबको महत्वपूर्ण खेल छाडेर समर्थकको ज्यान बचाएका थिए । उनको यो कार्यपछि नेदरल्यान्ड्समा रक्तदान गर्नेको संख्या पनि बढेको उनले बताए ।
Tagged FIFA the best 2018football
August 17, 2018 Prashant Gurung
March 21, 2019 March 21, 2019 सुबास मसिही
नेपालकाे शानदार जित: भुटान ४-० ले पराजित, सुनील बने नायक
September 7, 2018 सुबास मसिही